ဖတ်ခွင့်ရတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါ..။
ပန်းကလေးတွေက စကားပြောတော့ သီချင်းလေးတွေလို နားထောင်တတ်ကျတယ်....
ပန်းပွင့်ကြီးတော့ စကားများများပြောတော့ ကျွန်တော်တို့ စိတ်ပျက်ကြတယ်..။
I had been read translation of Mg Tun Thu, like SHE, CITADEL and others.
I never read other his own articles.
Awaiting your sharing.
အဆုံးပိုင်းကို ရုတ်တရက်ကြီး သိမ်းလိုက်ပေမယ့်
မပန်ရေ အသစ်အဆန်းလေးတွေ ဖတ်ရလို. တင်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စာရေးတဲ့သူကိုတော့ နဲနဲပြန်ပြောချင်ပါတယ်။ လူတိုင်းမှပါးစပ်ပါကြပါတယ်။ မိန်းမမှမဟုတ်ပါ ယောကျာ်းတော်တေ်ာများများလဲ စကားများကြပါတယ်။နိုင်ငံခြားရောက်မှ ယောကျာ်းတော်တော်များများက စကားများရုံတင်မက၊ အတင်းလဲ အလွန်ပြောတတ်ကြောင်း လက်တွေ.သိရှိထားပါတယ်လို.။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် စာအသစ်လေးဖတ်ရလို. မပန်ကိုတော့ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။
ကိုယ်တွေ့ ဗျို့ကိုယ်တွေ့။ စာကောင်းစာမွန်လေးတွေ ဖတ်ရတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါ မပန် ။ :)
ဒူကြီးတို့ လဲ အိမ်ထောင်သက် ကြာတော့ ကုလားတိုက် ကျားမဝင်မဲ့ ရက်မျိုး ရှိခဲ့ရင်တောင် ကြောက်လာမိသေး... ဟတ်လား ပန်ဒိုရာစံ...သူလဲ ဂျူး ဆွဲလှုပ်ဖူးတဲ့ Essential ပဲလေ။
thks for sharing... yes...
very pretty sentencs is the last.
That's called (K.I.T)keep in talking.:-)).
တချို့မိန်းမတွေဆို စကားကို မပြောဘဲ စာနဲ့ဘဲ ရေးတာတွေရှိတယ်
စကားလုံးတွေထက် တယ်လီပသီ (စ်ိတ်စွမ်းအင်) နဲ့ ဘဲ ဆက်သွယ်ချင်တဲ့ မိန်းမတွေလည်း အများကြီး
I love this post. Thanks for sharing Ma Pan.
ဒီအက်ဆေးလေးလည်း ကြိုက်ပ .. အထူးသဖြင့် နောက်ဆုံးစာကြောင်းလေး။
စာက ဖတ်ရတာ သိပ်သွက်တာဘဲ...အရေးအသားတွေက အတုယူစရာကောင်းတယ်...
သတိရနေပါတယ် ပန်ဒိုရေ...နော်နော့်ပုံအတွက်လဲ ကျေးဇူးပါ..
“သြော်” တစ်လုံးပဲ ပြောနိုင်တယ်။ စာကောင်းလေးတွေ မျှပေးတာ ကျေးဇူးပဲနော်။
ကျွန်တော်လည်း အဲဒီလိုဖြစ်နေပြီ အစ်မရေ.. အခုလတ်တလော ကျွန်တော့်အဖြစ်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေလို့.. ကော်မန့်လေး ပြန်လာထည့်သွားတယ်.. ဝေးနေတဲ့ စာအဟောင်းတွေကို ပြန်ရှယ်ပေးတာလည်း ကျေးဇူးတင်ပါရစေ..